Keel သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံ villa
20ပေ ၄၀ ပေအသစ်သောရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကွန်တိန်နာဘတ်စကက်ဘောတရားရုံးရုံး
Wooden Look Prefabricated House ဟိုတယ်သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး ကြမ်းခင်းနှင့်အတူ Prefab House Residence အင်း
ရေချိုးခန်းလွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အတူ Grey Look ချောင်ထုပ်ပိုးကွန်တိန်နာစိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား
လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ရန်ချည်းထုပ်ပိုးထားသောကွန်တိန်နာအဆောင်2အလွှာများ
စျေးနှုန်းချိုသာသောအသားညှပ်ပေါင်မုန့်သည်အရှေ့တောင်အာရှရှိအိမ်များကို ပို၍ နှစ်သက်သည်
စိတ်ကြိုက် prefab T ဇိမ်ခံစိတ်ကြိုက် modular အိမ်များ
ကုမ္ပဏီအမည်:Foshan The Box Modular အိမ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
လိပ်စာ:အမှတ် ၄၃, Liuxin ကျေးရွာ, Lianbiao ရှန်မြို့, Foshan ၏ Nanhai ခရိုင်
ကွန်တိန်နာအိမ် | လှပပြီးသက်သောင့်သက်သာ
A container house isahouse that can be built intoahabitable house. ဤအမျိုးအစားကွန်တိန်နာအိမ်သည်နိုင်ငံအတွင်းလူကြိုက်များသည်. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤအိမ်၏စတိုင်သည်ဘတ်ဂျက်တည်ဆောက်မှုကိုအသုံးပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်, နှင့်တိုးအလွန်စျေးကြီးမဟုတ်ပါဘူး, နှစ်ခုကွန်တိန်နာပါဝင်သည်. Or use multiple containers to…
ကွန်တိန်နာအိမ်, also known as shipping container house, refers to the main container as the basic material. It has been transformed intoasimple house with windows and doors. The container isalarge loading container with certain strength, rigidity, and specifications. The size is close to the building room, the…
တယ်လီ: +86 0757-85220032
မိုဘိုင်း: +86 13143683725
ဘာလဲ: +86 18307579541
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ယ်ယူသူများအားအရည်အသွေးရှိသောကုန်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပေးရန်ကြိုးစားသည်. တောင်းဆိုချက်, နမူနာ & ကိုးကား, ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!
Foshan The Box Modular House ကုမ္ပဏီလီမိတက်© 2020 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး